Etu aga-esi amata ọdịiche dị n'etiti akụkụ akpaaka
Ọtụtụ n'ime ihe akpọrọ GM mbụ na Auto Parts City, ahịa na ntanetị adịgboroja. Ego olulu ekwughi, a na-etinye ngwa ọ bụla adịgboroja na ụgbọ ala, a ga-enwe ihe ọghọm nchekwa! E nwekwara ọtụtụ ngwa bụ re "ịlọ ụwa" nke scrap ụgbọ ala ihe. N'ebe ahụ ...
Ofkpụrụ nke Mgba Mmanụ na Mmezi Nke Mmanụ Mmanụ
Ọ dị mkpa ihicha mmanụ mmanụ. A na-ejikọ mmanụ ọkụ na pipeline n'etiti mgbapụta mmanụ na ụzọ nke ahụ valvụ. Ọrụ nke nzacha mmanụ bụ iwepụ iron oxide, ájá na adịghị ọcha ndị ọzọ dị na mmanụ ọkụ ahụ, gbochie usoro mmanụ ọkụ na ngọngọ ...
Ọrụ na Workingkpụrụ Ọrụ nke Mgbapụta Mmanụ Moto
Mmanụ mmanụ mgbapụta na-arụ ọrụ a na-apụghị ịgbanwe agbanwe na ọrụ nke injin ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na mmanu mmanu mmanu mmanu ezughi ezu, kedụ mgbaàmà ndị ga-apụta? Ego ole ka mmanụ ụgbọ ala mmanụ mgbapụta dị? Mgbaàmà nke mgbapụta mmanụ ọkụ na-ezughị ezu nke mgbapụta mmanụ ụgbọala Ọ bụrụ na nrụgide mmanụ ụgbọ ala ...
Nweta ahịa ọhụrụ si n’aka anyị
SitemapMercedes-Benz Mmiri mgbapụta, Mercedes-Benz ụgbọala mgbapụta mmiri, CUMMINS Engine Water mgbapụta, Cummins Mmiri mgbapụta, Mmiri mgbapụta, Mercedes-Benz Igwe mgbapụta mmiri,